ဘတ်စကားပေါ်က ဇာတ်လမ်းအစိ – Grab Love Story
ရုံးဆင်းရုံးတက်ချိန်ဆိုရင် ဘတ်စ်ကားကျပ်တာ သဘာဝပါ။ လူကျပ်တဲ့ ကားစီးရလို့ ဒုက္ခရောက်တာကတမျိုးဆိုပေမဲ့ တခါတလေ ဖီးလ်ရတဲ့ အရသာကလဲ ယောကျားရော မိန်းမတွေပါ ခံစားတတ်ကြတာပါပဲ။ ထိရ တွေ့ရလို့ ယောကျားတွေချည်းပဲ ဖီးလ်တယ် မထင်ပါနဲ့။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျွန်မတို့ မိန်းမတွေလဲ ထိရတာ တခါတလေ ဖီးလ် ဖြစ်ကြတာပါပဲ။
ကျွန်မဆိုရင် ကျောချင်းကပ် ရပ်ကြရတဲ့အခါ ဖင်သားချင်းထိမိတာကိုပဲ တခါတလေ ဖီးလ်တတ်သေးတာ။ ကျွန်မက ထန်တယ်လေ။
ကျွန်မအသက်က ၄၃ နှစ်။ အသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်မှာ လင်နောက်လိုက်ပြေးခဲ့တယ်။ မိဘတွေက ပြန်လိုက်ခေါ်ပြီး ကျွန်မတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကို အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားကြရတယ်။ ကျောင်းမှမပြီးသေးတာ။ မိဘဆိုတော့လဲ ပထမတော့ ကရုဏာဒေါသတွေထွက်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့
ုဖြစ်ပြီးမှတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ဆိုသလိုပေါ့ရှင်။ အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ထားပြီး အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပြန်ထားပေးကြလို့ ကျွန်မတို့ ဘွဲ့တွေရခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်မ မိဘအိမ် တလှည့် ၊ ယောက်ျားရဲ့မိဘအိမ်တလှည့် နေခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မရော ကျွန်မယောက်ျားပါ အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ အလုပ်တဖက်နဲ့ပညာရေးတဖက်နဲ့ ရပ်တည်နေကြရင်း နောက်ဆုံးနှစ်မှာ သမီးလေး ကိုယ်ဝန်ရလာတယ်။ နောက်ဆုံးနှစ်ဖြေတော့ ဗိုက်ကြီးကော့လန် ကော့လန်နဲ့ပေါ့။ သမီးလေးမွေး၊ ဘွဲ့ရပြီး သိပ်မကြာဘူး။ ကျွန်မယောက်ျားက ကားတိုက်ပြီး ဆုံးသွားရှာတယ်။ ကျွန်မမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကလေးတယောက်အမေ မုဆိုးမလေး ဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့။ သမီးလေး မျက်နှာနဲ့ နောက်လင်မယူတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ပေမဲ့ ကျွန်မမိဘတွေက ကျွန်မထက် နဲနဲအသက်ကြီးတဲ့ ကလေးမရှိမုဆိုးဖို တယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ထပ်ချပေးလိုက်တယ်။ သြော် ကျွန်မနာမည်က ခိုင်ခိုင်။ ကျွန်မသမီးလေးနာမည်က မိုးမိုးခိုင်၊ ကျွန်မနောက်ယောကျား နာမည်က ကိုကျော်။ ခုဆို သမီးလေးတောင် အသက်နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ရှိပြီ။ ကိုကျော်နဲ့ ကလေးထပ်မရဘူး။ ကိုကျော်ကအနေအေးတယ်။ သမီးကိုလဲ သမီးရင်းလိုပဲ သဘောထားတယ်။ ချစ်တယ်။ ခက်တာက ကျွန်မရဲ့သမီး။ အပျိုပေါက်ဖြစ်လာကတည်းက ပထွေးကို လိုတာထက်ပိုပြီး ချွဲပစ်နေတယ်။ အရမ်းလဲ နီးကပ်ပွတ်သပ်နေထိုင်တတ်တယ်။ ကျွန်မသိတာပေါ့။ ကျွန်မသမီးလဲ ကျွန်မလို အထန်မပဲဆိုတာ။
“ဟဲ့ မိုးခိုင် ငါပြောထားမယ်နော် ကိုကျော်က နင့်ပထွေး၊ အရမ်း နီးကပ်နေတာတွေ နင့်နေပုံထိုင်ပုံတွေ ငါမကြိုက်ဘူး”
“သိပါတယ် အမေရယ် သမီးကကလေးမှမဟုတ်တော့တာ”
“အေး ကလေးမဟုတ်လို့ ပြောနေတာပေါ့ဟဲ့… ကြည့်နေကြည့်ထိုင်”
ထွက်သွားတဲ့သမီး မိုးခိုင်ရဲ့ နောက်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်း ကျွန်မသက်ပြင်းချမိတယ်။ မိုးခိုင်က အမေတူသမီးမို့ ဖင်တွေ ရင်တွေက ကျွန်မလို အယ်ထွက်နေပြီ။ လမ်းလျှောက်တိုင်း ဖင်တွေရင်တွေက လှုပ်လိုက်တိုင်း ယောက်ျားတွေ သရေယိုချင်စရာ။ ကျွန်မရဲ့ ဖင်တွေဆိုတာလဲ ဘေးဝိုင်းကားတဲ့အပြင် ဒုနဲ့ထည်နဲ့ကို ဆူထွက် လုံးတစ်နေတာ။ နို့တွေဆိုရင်လဲ ပျော့တွဲမနေသေးဘူး။ မာတင်းပြီး လုံးထွက်နေတာ။ သမီးကလဲ အမေ့အမွေ အကုန်ရတာလေ။ အမွေရတဲ့အထဲမှာ နှာထန်တာလဲ ပါတယ်ထင်ပါ့။ ကျွန်မရဲ့ဖင်တွေရင်တွေတင်မဟုတ်သေးဘူး။ ကျွန်မရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူတွေက မြင်လိုက်တာနဲ့ အရမ်းဖီးလ်လာစေတယ်လို့ လင်နှစ်ယောက်စလုံးက ပြောကြတာပဲ။ သေသွားတဲ့လင်ဆိုရင် ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းကိုကြည့်ပြီး ဒီနှုတ်ခမ်းနဲ့ လီးစုတ်ခံလိုက်လို့ကတော့ကွာ ဆိုပြီး ချက်ချင်းလီးတောင်စေသတဲ့… ဟင်းဟင်း ကျွန်မကလဲ အဲဒီလို ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေ ကိုယ်သိတော့ ယောက်ျားတွေ ငမ်းကြပြီဆိုတာနကြစိတ်ကကြွလာတာပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်မလိုဖင်ရင်ကြီးတဲ့ မိန်းမတွေက လမ်းလျှောက်လို့ လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း လှုပ်လှုပ်သွားတဲ့ ဖင်သားတွေ ရင်သားတွေရဲ့ တုန်ခါမှု၊ ဖင်သားချင်း ရင်သားချင်း ပွတ်တာတွေနဲ့ပါ နှာစိတ်တွေ ကြွလာတတ်ကြတာမျိုးလေ။
တနေ့တော့ ကျွန်မ ရုံးသွားနေကျအချိန်အတိုင်း ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ကို ထွက်လာတယ်။ မှတ်တိုင်မှာ လူတွေအများကြီးပဲ။ ကားရောက်လာတော့ တိုးတက်ကြတာပေါ့။ ကားကျပ်တဲ့အခါ မတ်တပ်ရပ်တဲ့လူတွေက နှစ်တန်းသုံးတန်း တန်းပြီး ရပ်ကြရတာပါ။ အဲလိုအခါမျိုးမှာ နောက်ကလာထောက်တတ်ကြတယ်။ လက်ကမြင်းတတ်ကြတယ်။ တခါတလေ ကျောချင်းကပ် ဖင်ချင်းပွတ်နေတတ်ကြတယ်။ လီးနဲ့လာထောက်မှ လက်နဲ့ လာကိုင်မှ မဟူတ်ဘဲ အဲလိုဖင်ချင်းပွတ်နေရတာလဲဖီးလ် တမျိုးပါပဲရှင်။ အဲဒီ့နေ့က ကျွန်မနောက်က ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကျောချင်းကပ် ဖင်သားချင်းထိပြီး ဟိုဘက်ရွေ့လိုက် ဒီဘက်ရွေ့လိုက်လုပ်နေတယ်။ ကျွန်မနောက်ကိုနဲနဲ ငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ ကောင်လေးကလဲ ငဲ့ကြည့်တယ်။ သန့်သန့်ပြန်ပြန့်လေးပါ။ ကျွန်မစိတ်ထဲလဲ တမျိုးဖြစ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ဖင်ကို နောက်နဲနဲပစ်ပြီး ခြေထောက်ကို နဲနဲကားပေးလိုက်တယ်။ သူကလဲ သူ့ဖင်ကိုနေရာနဲနဲရွေ့ပြီး ကျွန်မရဲ့ဖင်တလုံးကိုသူ့ဖင်ကြားထဲရောက်အောင် လုပ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ သူ့ဖင်လုံးလေးတလုံးကလဲ ကျွန်မဖင်ကြားမှာ လာညှပ်နေတာပေါ့။ ထူးဆန်းတယ်ရှင့်။ အဲလို ဖင်သားချင်း ထိကပ်နေရတာကိုပဲ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်စိတ်ကြောင့်ထင်တယ်။ ဖီးလ်တွေတက်နေကြတာ။ကျွန်မကအဲလောက်ကို ထန်တာပါဆို။ ကျွန်မ စောက်ဖုတ်မှာ အရည်တောင်စို့လာပြီ။ ဒီလို တလမ်းလုံး ဖီးလ်ယူလါရင်း ဆင်းရမဲ့မှတ်တိုင် ရောက်တော့ ကျွန်မ တံခါးနားတိုးထွက်လိုက်တယ်။ အဲကောင်လေးကလဲ ကျွန်မနောက်က ကပ်လိုက်လာပြန်တယ်။ ဒီတခါတော့ သူ့လီးနဲ့ကျွန်မဖင်ကို ထိထိမိမိကိုကပ်ဖိထောက်ထားတာရှင်။ အတွင်းခံဝတ်ထားတာတောင် သူ့လီးကြီးရဲ့အထိအတွေကို ကျွန်မခံစားမိနေတယ်။ အတော်ကြီးပြီး အတော်သန်မဲ့လီး ဆိုတာ အတွေ့အကြုံအရ သိတယ်။ ကျွန်မစိတ်တွေ ဆူလာတယ်။ ဒါတောင် ညက ကိုကျော်နဲ့ လိုးထားတာနော်။ တစိမ်ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ဘအထိအတွေနဲ့တင်ကျွန်မ နှာထနေပြီ။ ကျွန်မ နောက်ကို ငဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ ကောင်လေး တချက်တုန်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ပဲကျွန်မမျက်နှာကို ပြုံယောင်လေး သမ်းပြလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ သူတို့ယောက်ျားလေးဆိုတာ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေက လမ်းစမဖွင့်ပေးရင် ရှေ့ဆက်ဖို့ မရဲတတ်ကြဘူးလေ။ ကျွန်မက သူ့ကို လမ်းစဖွင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ စိတ်မဆိုးတဲ့အမူအရာမျက်နှာပေးလေးလုပ်ပေးလိုက်တာ။ အဲလိုလဲဆိုရော ကိုယ်တော်ချောရဲ့လက်က ဖင်ပေါ်ရောက်လာတော့တာပဲ။ မှတ်တိုင်မရောက်ခင် မီးပွိုင့်မိတာကလဲ ကြာတယ်။ အဲအချိန်မှာ ကိုယ်တော်ချောက ဖင်ကို ဆုတ်ကိုင်ဖြစ်ညစ်တော့တာပဲ။ ကျွန်မလဲ ဖီးလ်တွေ အရမ်းတက်နေပြီ။ အရည်တွေလဲရွဲနေပြီ။ ဒါနဲ့မှတ်တိုင်ရောက်တော့ ခရီးသည်တွေဆင်းကြတာပေါ့။ ကျွန်မလဲ ဆင်းပြီး နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကောင်လေးက လိုက်လာတယ်။ ပြီးတော့ကျွန့်မကို ပြုံးပြတယ်။ ကျွန်မလဲ ပြန်ုပုံးပြပြီး သူ့ရှေ့က လျှောက်လာလိုက်တယ်။ နောက်ကနေ ကျွန်မဖင်တွေကို ကြည့်နေမှာသိလို ဖင်ကို ပိုလှုပ်ပြီး လျှောက်ပစ်လိုက်တယ်။
ကျနော့်က မာအမ် ။ ဒီနေ့မနက် ကျနော့်ဆော်လေးကို တွေ့ဖို့ သူ့ရပ်ကွက်ဘက်လာခဲ့တယ်။ ကျနော့်ဆော်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး။ ကျတော်က ကျောင်းပြီးလို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေပြီ။ ဆော်လေး ကျောင်းမသွားခင် သူတို့လမ်းထိပ်မှာတွေဖို့ ချိန်းထားတာနဲ့ လာခဲ့တာ။ ဆော်လေးက ကျောင်းကားနဲ့ ကျောင်းသွားတာပါ။ သူ့ကျောင်းကားမလာခင် ခဏလေးပဲ တွေ့ကြရတာ။ အရင်ကတော့ ခုလို ကျနော်သူ့ဆီလာရင် သူကျောင်းကားမစီးတော့ဘဲ လိုင်းကားနဲ့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ သူ့ကို ကျောင်းပို့ပြီးမှ ကျနော်ပြန်တယ်။ ဒီနေ့တော့ အလုပ်ကိစ္စတခု မနက်ပိုင်းချိန်းထားတာရှိတော့ သူ့ကျောင်းထိ လိုက်မပို့တော့ဘဲ ကျောင်းကားမလာခင်အချိန်လေးပဲ ခဏတွေ့ စကားပြောပြီး ကျောင်းကားလာတာနဲ့ သူမလိုက်သွားခဲ့တယ်။ ကျနော်လဲ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ခဏဆက်ထိုင်ပြီးမှ မြို့ထဲသွားဖို့ ဘတ်သ်ကားမှတ်တိုင်ဘက်ထွက်ခဲ့တယ်။ မှတ်တိုင်မှာ ဆော်ကြီးတဗွေတွေ့တယ်။ ဘော်ဒီကစောက်ရမ်းမိုက်တယ်။ ဖင်ကြီးတွေက အယ်နေတာပဲ။ နို့ကြီးတွေလဲ ကြီးတယ်။ ဒါပေမဲ ဗိုက်ခေါက်အဆီတွေမရှိဘူး။ ခါးမတုတ်ဘူး။
ဘွားတော်ရဲ ဖင်တွေနို့တွေကို ဘေးတိုက်ငမ်းနေရင်းကနေ ဘွားတောရဲမျက်နှာမြင်ရမဲ့နေရာ သွားရပ်လိုက်တယ်။
ဘွားတော်အသက်က လေးဆယ်ကျော်လောက်တော့ရှိမယ်။ သူ့မျက်နှာမှာ အထူးခြားဆုံးက သူ့နှုတ်ခမ်း။ နှုတ်ခမ်းထူထူမှာ အောက်နှုတ်ခမ်းအလယ်က အရာလေးထင်နေတယ်။ နှုတ်ခမ်းကအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဗျာ။ ကြည့်ရင်း ကျနော် လီးတောင်လာတယ်။
“ဒီဆော်ကြီးက အမြဲဒီအချိန် ဒီမှာ ကားစောင့်နေကျများလား”
နောက်ရက်တွေအတွက်ပါ တခါထဲ plan ချမိတယ်။ နေ့တိုင်း ဒီအချိန်လာမယ်ပေါ့။ သူ့ကြည့်ရတာ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပုံစံမျိုးပဲ။ နေ့စဉ် အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်တော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့။ ဒါဆို မနက်တိုင်း ဆော်လေးကို လာတွေ့။ ပြီးတာနဲ့ ဒီဘွားတော်ကို လာငမ်းမယ်ပေါ့။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော်စီးမဲ့ကားနဲ့ဘွားတော်စီးမဲ့ကားက နံပါတ်အတူတူပဲ။ ဒီတော့ တစီးထဲ စီးရတော့မယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ သူ့နောက်က ကပ်လိုက်သွားတယ်။ ပိုက်ဆုံပုံးထဲ ပိုက်ဆံထဲ့နေတုန်း အခွင့်ရေးရတာနဲ့ သူ့ဖင်ကြီးကို ကျနော့် လက်ခုံနဲ့ ထိပလိုက်တယ်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေ့ဗျာ။ တခြားဖင်တွေလိုမဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ဘသူ့နောက်က ကပ်လိုက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တည့်တည့်ကနေ ကပ်ရပ်လို့မရဘူး။ ကျောချင်းကပ်မှပဲရမဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ လီးနဲ့မထိရလဲ သူ့ဖင်ကြီးကို ကိုအသားတခုခုနဲ့ ထိပြီး ဖီလ်ယူလဲ ရတာပဲကွာ ဆိုပြီး ဘွားတော်နောက်ကပ်လျက်မှာ ကျောချင်းကပ် ရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ဖင်ကို ကျနော့ဖင်နဲ့ ထိပြီး ပွတ်နေလိုက်တယ်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ဖင်ကြီး ကောင်းလိုက်တဲ့အတွေ့။ ကားပေါ်ကဆင်းခါနီးတော့ သူ့နောက်ကနေဖင်ကို လီးနဲ့သေချာ ကပ်ထောက်ပလိုက်တယ်။ ဒါကို ဘွားတော်က နောက်လှည့်ပြီး ကျနော့ကို ပြုံးပြတယ်။ ဟာ..ဂွင်ပဲကွာ။
ဘယ်ရမလဲ ရတောင့်ရခဲအခွင့်အရေးလေး။ သူ့ဖင်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုတ်ကိုင်ဖြစ်ညစ်ပလိုက်တယ်ဗျာ။
“ဟို… အန်တီ…အဲ..အစ်မကြီး အစ်မကြီး…. ဒီမြို့ထဲက (…..)ဆိုင်က ဘယ်နားမှာလဲ သိလားခင်ဗျ…”
ကျွန်မနောက်ကနေ လိုက်လာပြီး ဘေးချင်းယှဉ်တဲ့အခါ ကားပေါ်တယ်မှာတုန်းကကောင်လေးက ကျွန်မကိုလာမေးနေတာပါလား။ ကျွန်မသိတာပေါ့ သူလာပြီး ဂွင်ဆင်နေတယ်ဆိုတာ။
“အော် ဟိုရှေ့နားမှာတင်ပဲ မောင်လေး…အစ်မလဲ အဲဘက်သွားမှာ လာ အစ်မနဲ့လိုက်ခဲ့”
“ဟုတ် ဟုတ် ကျေးဇူးပါပဲဗျာ…ဒါနဲ့ အမကြီးက ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တာလား၊ ဒီမြို့ထဲမှာလား ရုံးက”
“အင်းဟုတ်တယ်…ဒီနားမှာပဲ…” ခပ်တည်တည် တုံးတိတိဖြေလိုက်တယ်။
ကားပေါ်က ဖြစ်ခဲ့သမျှတွေကို မသိသလိုနေလိုက်တယ်။ ကောင်းလေးကြည့်ရတာ ရည်ရည်မွန်မွန် သန့်သန်ု့ပြန်ပြန့်လေး။ သူ့ကို သာယာမိတာတော့အမှန်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးပေါသွားမှာလဲ မဖြစ်ချင်ဘူး။ ပြန်ပြီး ခပ်တည်တည်နေမှပါလို့ စဉ်းစားမိတယ်လေ။
ကားပေါ်မှာတုန်းကတော့ ဖင်အလှူပေးခဲ့ပြီး ခုတော့ ဘွားတော်က ရုပ်တည်ရုပ်နေတယ်။ ဘယ်ရမလဲ မာအမ်ကို ဒီလိုလုပ်လို့။ ကားပေါ်မှာ လီးနဲ့ထောက်ပြီး ဖင်ကို သေချာဖြစ်ညစ်ခဲ့တာပဲဟာ။ ဆက်ပြီး လုံးရတော့မှာပေါ့။
“ကျနော့နာမည် မာအမ်ပါ အမ။ ကျနော်က ဒီဇိုင်းဆွဲပါတယ်။ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာပဲ အထိုင်များတယ်။ မြို့ထဲ သိပ်မလာဖြစ်ဘူး။ အခု အလုပ်ကိစ္စတခုနဲ့ အဲဆိုင်ကို ချိန်းထားတာ လာတွေ့တာပါ။”
“အင်း..အင်း… ရှေ့မှာ မင်းမေးတဲ့ဆိုင်ပဲ…. သွားပြီနော်”
“အမ်…ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူး အမ… တခုခုဧည့်ခံပါရစေလားအမ
“အော်ရပါတယ် ငါ့မောင်ရယ်…အမအချိန်မရတော့လို့ပါ။ ရုံးနောက်ကျတော့မှာမို့လေ… ကျေးဇူးပဲနော်…”
ဘွားတော်က ကျနော့ကို ကလေးလိုလို ခွေးလိုလို သဘောထားပြီး
ခေါက်ထားခဲ့တယ်။ အထာတွေပေးပြီး ဒီလိုကြီးလုပ်သွားတာ ဘယ်ကောင်းမလဲဗျာ။ ဒီကောင်မှာ လီးကတအားတောင်ခဲ့ရပြီလေ။ ဒါနဲ့ ဆိုင်ထဲမဝင်ဘဲ သူနောက် မလှမ်းမကမ်းကနေ နောက်ယောင်ခံလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျ… အဲဒီ့နားက အဆောက်အဦးတစ်ခုရဲ့ ရုံးတခုထဲဝင်သွားတာ။ ဒါနဲ့ အဲရုံးနားက ကွမ်းယာဆိုင်မှာ စီးကရင်ဝင်ဝယ်ပြီး
“ဒီရုံးက ညနေဘယ်အချိန်တင်းတာလဲဗျ” … လို့ စုံစမ်းလိုက်တယ်။
“ညနေ ငါးနာရီဆို ဆင်းပြီဗျ…ဘာဖြစ်လို့လဲ”
“ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာ…အဲမှာ အလုပ်ခေါ်နေတယ်ဆိုလို့ သွားလျှောက်မလို့ပါ”…..
ညနေ ငါးနာရီမထိုးခင် အဲရုံးနားမှာ လာစောင့်နေလိုက်တယ်။ ငါးနာရီထိုးပြီးတော့ ရုံးထဲကဝန်ထမ်းတွေထွက်လာကြတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဘွားတော်ထွက်လာတာတွေ့ရတယ်။
သူ့ရုံးကလူတွေ သူ့ကို နှုတ်ဆက်တာကြားလိုက်တယ်။ အန်တီခိုင်တဲ့.။
ဂျာကြီးတဲ့…။ ok ရပြီ နာမည်တော့သိရပြီ။ သူ့နောက်က အသာလေး လိုက်သွားလိုက်တယ်။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ရောက်တော့ ဘွားတော်ကားစောင့်နေတယ်။ ကျနော်လဲ သူမမြင်အောင် သူ့နောက်မလှမ်းမကမ်းကနေ သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ ခဏကျတော့ ဘတ်စ်ကားဆိုက်လာတယ်။ တိုးဝှေ့တက်ကြတယ်။ အန်တီခိုင်လဲ တတ်မလို့ပြင်နေတယ်။ ကျနော်လဲ သူ့နောက်ဘက်ကပ်သွားလိုက်တယ်။
အမှတ်တမဲ့ ပြန်ဆုံသလို ဇယားခင်းလိုက်တယ်။
မနက်က ကားပေါ်မှာ ဆုံခဲ့တဲ့ကောင်လေးက ရုတ်တရက်နှုတ်ဆက်လိုက်တော့ ကျွန်မ အံသြသွားတာအမှန်၊ ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်းတွေးမိတာက ဒါတိုက်ဆိုင်တာ မဖြသ်နိုင်ဘူး။ သူတမင်ဂွင်ဆင်တာဆိုတာ ရိပ်မိလိုက်တယ်။ မနက်ထက် ပိုပြီးအတင့်ရဲတော့မှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ အဲလိုတွေးလိုက်တာနဲ့ မနက်က ထိခဲ့ရတဲ့ သူ့လီးကြီးရဲ့အထိအတွေ့ကို
ဆစ်ကနဲ စောက်ဖုတ်ထဲက ယားတက်လာတယ်။
ကားပေါ်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကားက ငပိသိပ်ငချင်သိပ်ကျပ်တာ။ ကောင်လေးက ကျွန်မနောက်ကနေ တချိန်လုံး လီးနဲ့ထောက်ပြီး လိုက်လာတယ်။ ကားနောက်ပိုင်းအတွင်းထဲရောက်ပြီး ရှေ့ဆက်တိုးလို့မရတဲ့အခါမှ ရပ်လိုက်တယ်။ သူကလဲ ကျွန်မနောက်မှကပ်လျက်ပဲ ရပ်တယ်။
“အစ်မရလား…လက်ထဲက ခြင်းကိုကျနော့်ပေးလေ ကိုင်ပေးထားမယ်”
“အယ် ရပါတယ်…သူလဲ မတ်တပ်ကြီးရပ်နေရတာကိုများ။”
ပါးစပ်ကစကားသာပြောနေပေမဲ့ သူ့လီးက ကျွန်မ ဖင်ကြားထဲမှာ။
ကျွန်မလဲ ဖင်ကို နောက်ပိုကော့ပေးထားလိုက်တယ်။
ကျွန်မရှေ့ထိုင်ခုံမှာထိုင်နေတဲ့ လူက လက်ထဲကခြင်းတောင်း ကိုင်ပေးဖို့တောင်းတယ်။
လက်ထဲမှာ ခြင်းတောင်းမရှိတော့လို့ ထိုင်ခုံကို တဖက်ကကိုင် တဖက်က အပေါ်တန်းကိုကိုင်ပြီး ဖင်ကိုမသိမသာလေးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ကိုယ်တော်ချောက လီးနဲ့တင်အားမရတော့ဘူး။ လက်တဖက်ကပါ ဖင်ကို စပြီးပွတ်တော့တယ်။ လူတအားကျပ်နေလို့သာ ကျွန်မနဲ့သူဖြစ်နေတာကို တခြားလူတွေမရိပ်မိတာ။ ကောင်လေးက ကျွန်မဖင်ကို ပွတ်လိုက် ဖင်ကြားထဲ နှိုက်လိုက် နဲ့ ။ သူ့လက်ခလယ်ကို ထမီပေါ်ကနေ စအိုဝအထိ မထိထိအောင် အတင်းထိုးပြီးကလိလိုက်နဲ့…. ကျွန်မလဲ ရှေ့မှာ စောက်ရည်တွေ ရွဲနေပြီး ပေါင်ကြားထဲတောင် စီးကျနေပြီ…။
ကျွန်မက ကိုယ့်ဖီးလ်နဲ့ကို ခံစားနေတုန်း ကျွန်မရဲ့ စောက်ဖုတ်နေရာကို တခုခုလာထိတာခံစားလိုက်ရတယ်။ သတိထားကြည့်လိုက်တော့။
ကျွန်မရှေ့က ခြင်းတောင်းကိုင်ပေးထားတဲ့လူ။ သူက ကျွန်မခြင်းတောင်ပေါ်ကို လက်နှစ်ဘက်ယှက်တင်ထားပြီး ခေါင်းကငုံ့ပီး ရှေ့ထိုင်ခုံကို မှီထားတယ်။ခြင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ သူ့လက်တဖက်က သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ ဖုံးကွယ်နေတယ်။ အဲဒီ့ဖုံးနေတဲ့ လက်နဲ့ကျွန်မရဲ့စောက်ဖုတ်နေရာကို ချိန်ထားတာ။ ကားလှုပ်တာနဲ့ အိပ်ငိုက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဒီလူက လှုပ်တာ။ လှုပ်တာနဲ့သူ့လက်က ကျွန်မစောက်ဖုတ်နေရာကို ခါထိတော့တာပဲ။ နောက်ကလဲ လီးနဲ့ဖင်ကြားထဲထောက်ထား လက်နဲ့ ဖင်တွေပွတ်လိုက် ညစ်လိုက်လုပ်တာခံနေရတဲ့ကျွန်မဟာ တချက်တချက်နောက်က ကောင်လေး ညှောင့်လိုက်ရင် ရှေ့ကိုကော့ကော့သွားတယ်။ ဒါကို ရှေ့ကငနဲက အကွက်ဝင်ပြီး ကော့လာတဲ့ စောက်ဖုတ်နေရာကို သူ့လက်ခုံနဲ့ ဖိဖိကပ်လာတယ်။
ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဗလာင်ဆူလာတယ်။ နောက်က လီးနဲ့လက်။ ရှေ့စောက်ဖုတ်တဲ့တဲ့မှာက တခြားတယောက်ရဲ့ လက်ခုံနဲ့ပွတ်နေတယ်။ ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှ လက်ကမြင်ခံနေရပါလား ဆိုတဲ့အသိက ကျွန်အရဲ့ နှာစိတ်ကို မီးတောက်စေပါတော့တယ်ရှင်……
နောက်ကနေ တိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်တဲ့ အသံက ကျမနားထဲမှာ ဟိန်းထွက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ အိမ်မက်မက်ပြီး လမ်းလျှောက်နေသူတယောက်လို ကျွန်မ ခေါင်းငြိမ့်မိတယ်။
“အကို ဆင်းတော့မယ် ကျွန်မရဲ့ခြင်းတောင်းလေး…. ကျေးဇူးပဲနော်”
ခြင်းတောင်းကိုင်ပေးထားတဲ့သူကို ပြောလိုက်တော့ သူမော့ကြည့်တယ်။ သေသေချာချာကိုစိုက်ကြည့်တာ။ ပြီးတော့ ခြင်းတောင်းမပေးခင် သူ့လက်နဲ့ထိနေတဲ့ ကျွန်မအဖုတ်ကို သူ့လက်ခုံနဲ့ သေသေချာချာ ဖိပွတ်ပလိုက်တယ်။
“ဘာဖြစ်လို့လဲ အစ်မ” … နောက်ကကောင်လေးကမေးတယ်။
“ဘာမှ မဖြစ်ဘူး….”လို့ပြောပြီး ခြင်းတောင်းကို လှမ်းယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆင်းရမဲ့အပေါက်ဘက် တိုးထွက်လိုက်တယ်။ ရင်ထဲမှာလဲ အရမ်းတုန်လှုပ်ပြီး စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတယ်။ ကောင်လေးခေါ်တာက ကျွန်မကို လိုးဖို့ခေါ်တာလေ။ ကျွန်မကလဲ အဲသည်လောက်ကို ထန်ပြီး အဲသလောက်အညှာလွယ်သွားတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ အံသြနေမိတယ်။
တသက်နဲ့တကိုယ် ထင်တောင်မထင်ထားဘူး။ မနက်ကမှတွေ့တဲ့ကောင်လေးနဲ့ ညနေ မျာ ခုလို လိုးခံဖို့ သူခေါ်ရာ လိုက်မိမယ်ဆိုတာ……။ ကျမကိုကျမလဲ အံသြနေမိတယ်။
ကျုပ်နာမည်က ရဲလင်း။ နေတဲ့ရပ်ကွက်ထဲမှာ Game ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ ဒီနေ့ အခွေသစ်ထွက်ဝယ်ပြီး အပြန် ရုံးဆင်းချိန်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ထိုင်ခုံနေရာရဖို့ ဘတ်စ်ကားကို ပတ်စီးလိုက်တယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ မှတ်တိုင်မှာ တက်တဲ့သူတွေက တပုံကြီး၊ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်လို ပတ်စီးသမားတွေများလို့ ထိုင်ခုံနေရာရဖို့တော့ မလွယ်ဘူး။ ကားရပ်တာနဲ့ အတင်းတိုးကျိတ်တက်နေသူတွေကို လှမ်းကြည့်မိတော့ ဟိုဘက်ရပ်ကွက်က ကိုကျော်ဆိုသူရဲ့ မိန်းမ တက်လာတာတွေ့လိုက်တယ်။ ကိုကျော် ဆိုသူနဲ့ ကျုပ်မသိပါဘူး။
မနေ့က ရပ်ကွက်ထဲက Game လာဆော့တဲ့ ကောင်လေးတွေနဲ့ အတူ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တုန်း အဲဒီ့ မိန်းမက ဆိုင်ရှေ့က ဖြတ်လျှောက်သွားတာ၊ ဒါကို ချာတိတ်တွေက လိုက်ငမ်းကြပြီး….
“တောက်ကွာ ဦးကျော်က အန်တီခိုင်ကိုဘမဖြိုနိုင်ဘူးထင်တယ် ကြာလေ ကြီးလာသလိုပဲကွာ….”
လို့ ချာတိတ်တယောက်က မချိတင်ကဲ ထပြောတယ်။
“ဟျောင်ဒွေ အဲဒါ ဘယ်ကလဲကွ…မင်းတို့သိလို့လား” ကျုပ်လဲ လိုက်ကြည့်မိတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျ ။ ပစ္စည်းတွေက အယ်ထနေတာပဲ။ ကျုပ်မိန်းမလဲတောင့်တော့တောင့်ပါတယ်။ သူ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူး။
ထားပါတော့ အဲလိုကျနော်လဲမေးလိုက်ရော ဟိုကောင်တွေအဖွဲ့က တယောက်တပေါက် ဝိုင်းပြောကြပါလေရော….။
“ဟာဗျာ ဦးရဲကလဲ ဒီလောက်အကိတ်ကြီး ရပ်ကွက်ထဲ နာမည်ကြီးနေတာ မသိဘူးလား။ အဲဒါဟိုဘက်ရပ်ကွက် အန်တီကြီး သူ့ယောကျားက ဦးကျော်တဲ့…သမီးတယောက်ရှိတယ်။ သူ့သမီးလဲ စောက်ရမ်းမိုက်တာ…အန်တီခိုင်လဲ မိုက်တာပဲ…”
“မင်းကလဲကွာ မမမိုးခိုင်ကို ကြွေရုံတင်မဟုတ်ဘူး။ သူ့အမေအန်တီ့ခိုင့်ကိုပါ ပစ်မှားနေတယ် …”
“အံမာ မင်းလဲ တီခိုင့်ဖင်တွေလိုက်ကြည့်တာပဲ မဟုတ်လား”
“ငါကတော့ကွာ တီခိုင်ရော သူ့သမီးပါ တွယ်ချင်တာ… “
ချာတိတ်တွေ ပြောကြတာနဲ့တင် သူတောင်ဒီလောက်လှနေတာ သူ့သမီးဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲလို့ ကျုပ်တွေးမိခဲ့တယ်။ သူမအကြောင်း ချာတိတ်တွေပြောသလောက်ပဲသိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့ရုပ်ကလဲ နှာထန်မဲ့ရုပ်မျိုး….။
အခု ဘတ်စ်ကားပေါ် သူမတက်လာတာတွေ့တော့ ကျုပ်လဲ ငမ်းတာပေါ့။ ကံကောင်းချင်တော့ ကျုပ်ဘေးနားလာရပ်တယ်။ ကျုပ်တံတောင်ဆစ်နဲ့ သူ့အဖုတ်နေရာနဲ့က တန်းနေတယ်။ ဒါနဲ့ အကြံရပြီး သူ့လက်ထဲက ခြင်းတောင်းကို ကိုင်ထားပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ခြင်းပေါ် လက်တင်ပြီး ရှေ့ခုံကျောမီကို ခေါင်းစိုက်ပီး မီထားလိုက်တယ်။ ကျုပ်အကြံက ကျုပ်လက်နဲ့ ကောင်မကြီးအဖုတ် ကားလှုပ်ရင် မတော်တဆထိချင်လဲ ထိအောင်ပေါ့။
ခေါင်းစိုက်ထားတော့ သူ့ဖင်က လှုပ်နေသလိုလို ဖြစ်နေတာ သတိထားမိတယ်။ ဒါနဲ့ ခေါင်းကိုနဲနဲစောင်း၊ မျက်စိကို စွေကြည့်လိုက်တော့ သူ့နောက်ကကောင်က သူ့ဖင်ကို ကလိုင်းနေတာကိုး။ ကောင်မကြီးကလဲ အငြိမ်မနေဘူးဗျ။ ဖင်ကို နောက်ပိုကောက်လိုက် ခြေထောက်ကို ကြားပေးလိုက်လုပ်နေတာ ခေါင်းအောက်စိုက်ထားတဲ့ ကျုပ်က သိနေရတယ်။ ဒီတော့ ခြင်းတောင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ လက်ကို လူမမြင်အောင် ဂျိုင်းအောက်ကနေအသာထားလိုက်တယ်။ ကားနဲနဲလှုပ်တာနဲ့ သူ့အဖုတ်နေရာကို ကျုပ်လက်ခုံနဲ့ထိထိပစ်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ အခြေအနေက ငြိမ်နေတော့ တဆင့်တက်ပြီး ကားမလှုပ်လဲ ဒီအတိုင်း လက်ကိုကပ်ထားလိုက်တယ်။ ကျာက်စိတ်ထင်လို့လားမသိဘူး။ ကောင်မကြီး အဖုတ်က ထိရတာ ဖောင်းနေသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ နဲနဲကာလာတော့ အဖုတ်ကို လက်ခုံနဲ့တင်မဟုတ်ဘဲ လက်ချောင်းနဲ့ပါ ကုတ်ဖို့ တွေးလိုက်တယ်…။
အဲဒီ့မှာပဲ ကျုပ်ပခုံးကို တချက်လာထိပြီး…
“အကို ဆင်းတော့မယ် ကျမရဲ့ခြင်းတောင်းလေး…ကျေးဇူးပဲနော်..”
ဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်ရတယ်။ ကျုပ်ရဲ့စီမံကိန်းပျက်သွားတာပေါ့ဗျာ။
ခြင်းပေးရတော့မှာမို့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သူ့အဖုတ်ကို ထိထိမိမိကြီး ဖိပွတ်ပလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့မျက်လုံးကို သေချာစိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်တယ်။ ကောင်မကြီးကြည့်ရတာ မူမမှန်ဘူးဗျ။ မျက်နှာကလဲ နဲနဲ နီနေသလိုလို။ စိတ်ကယောင်ခြောက်ခြား ဖြစ်နေသလိုလို…။ ကျုပ်လက်နဲ့ သူ့အဖုတ်ထိတာထက် သူ့နောက်ကကောင်က သူ့ကို လီးနဲ့ပါ ထောက်ထားမှာသေချာတယ်။ ဟိုကောင့်လက်ကလဲ အငြိမ်မနေဘူး ကျုပ်ကလဲ ရှေ့က လက်ခုံနဲ့ ပွတ်နေတာဆိုတော့ ကောင်မကြီးသိတ်ထသွားတာဖြစ်မယ်။ ပြီးတော့ သူတက်လာတော့ သူ့နောက်ကကောင်နဲ့လဲ စကားပြောတာတွေ့သေးတယ်။ အခုသူဆင်းတာက ကျုပ်တို့ဆင်းရမဲ့ မှတ်တိုင်မဟုတ်သေးဘူး။ အများကြီးလိုသေးတာ။
ဒါဆို ဒီကောင်မကြီး သူ့နောက်က ကောင်လေးနဲ့ ရိုးတော့မရိုးဘူး လို့ တွေးမိတယ်။ ဒါနဲ့ ဘာပဲဖစ်ဖြစ်နောက်က လိုက်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီး ကျုပ်လဲ မှတ်တိုင်ဆင်းဖို့ ထရပ်လိုက်တယ်။ ကျုပ်ထင်သလိုပဲ ဟိုကောင်လေးက ကောင်မကြီးနောက်မှာ အတင်းဖိကပ်ပြီး တိုးသွားတာ၊ ဆင်းခါနီး တံခါးဖွင့် ခရီးသည်တွေ ဆင်းကြတော့ လူချင်းကွာသွားကြတယ်။ အဲဒီ့မှာ ဟိုကောင်လေးပေါင်ကြားမှာ သိသိသာသာကြီး ဖုဖောင်းထွက်နေတာ ကျုပ်သေချာမြင်လိုက်တယ်။ သေချာပြီ။ ဒိနှစ်ယောက် ဇာတ်လမ်းဖြစ်တော့မယ်။ သူတို့ ဘယ်သွားမှာလဲ…။ ဒီနားမှာ တည်းခိုခန်းက တစ်ခုပဲရှိတယ်။ အဲဒီ့တည်းခိုခန်းမှာက ဆော်လဲခေါ်လို့ရတယ်။ ကျုပ်က မကြာခဏသွားနေတော့ တည်းခိုခန်းက လူတွေနဲ့တောင် ရင်နှီးနေပြီ။ သူတို့ အဲဒီ့ကိုသွားမှာလား။ ကျုပ်လဲ သူတို့နောက်ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ နောက်ယောင်ခံလိုက်လာခဲ့လိုက်တယ်။
ခုညနေတော့ ဆော်ကြီးအခြေအနေက မနက်တုန်းကထက် ပိုok နေတယ်။ ကားပေါ်စရောက်ကတည်းက ကျနော်လဲ သူ့ဖင်ကို ထောက်လာတာ။ ရပ်တော့လဲ လီးနဲ့ရော လက်တွေပါ ပွတ်လိုက်ထောက်လိုက်နှိုပ်လိုက်ပေါ့။ ဆော်ကြီးကလဲ ကော့ပေးလိုက် ကားပေးလိုက်နဲ့။ ဒီတခါတော့ မရတော့ဘူး ဘွားတော်ကို အရအုပ်တော့မယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ကျနော်သွားဖူးတဲ့ တည်းခိုခန်းရှိတဲ့ မှတ်တိုင်ရောက်ခါနီးမှာ ဘွားတော်ကို သွေးတိုးစမ်းပြီး ပြောထဲ့လိုက်တယ်။ လိုက်တာမလိုက်တာ ကံပေါ့ဗျာ။
“အစ်မ ရှေ့မှတ်တိုင် ဆင်းမယ် ဆိုတော့…”
ဘွားတော့က ok ခေါင်းငြိမ့်တယ်။ ဟား ရင်ထဲမှာ ကုလားဘုရားလှည့်နေတယ်။ တဒိန်းဒိန်းနဲ့….။ ကားပေါ်ကဆင်းတော့ ဘွားတော်နားကပ်သွားပြီး ခြင်းတောင်းကို ယူလိုက်တယ်။ ဘွားတော်ကလဲ ခြင်းတော့ပေးတယ် ဘာမှ မပြောဘူး။ ခေါင်းငုံပြီးလျှောက်နေတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်က မှောင်စပြုနေပြီ။ ညီအကိုမသိတသိအချိန်ပေါ့ဗျာ။
ဘွားတော်က အပျိလေးလိုရှက်နေတယ်။ လင်မရှိဘူးလား တခုလပ်လား မုဆိုးမလား မသိဘူး။ အပျိုကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အတော်တော့ထန်နေတာ။ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ အသားကုန်ပညာပြရယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ တည်းခိုခန်းကိုဝင် အခန်းယူပြီး အခန်းထဲရောက် ဝန်ထမ်းလေး ပြန်ထွက်သွားတာနဲ့ သူ့နောက်ကနေ သိုင်းဖက်ပြီး ကားပေါ်တုန်းကလို သူ့ဖင်ကြားထဲ လီးထိုးထဲ့ထားလိုက်တယ်။
“ပြန်ကြရင်ကောင်းမယ်ကွာ အန်တီမှာ အိမ်ထောင်နဲ့ မမှားကြခင် ပြန်ကြရအောင်နော် အန်တီတောင်းပန်ပါတယ်။ အန်တီစိတ်တွေ ဘာဖြစ်သွားမှန်မသိလို့ပါ… နော် တောင်းပန်ပါတယ်နော် ပြန်ကြရအောင်”
ဘွားတော်က ခုမှ အိမ်မက်ကလန့်နိုးသလိုပုံစံနဲ့ ထပြောတယ်။
“မမကလဲဗျာ မနက်ကထဲက တနေကုန် မမကြောင့် ကျနော် အရမ်းခံစားနေခဲ့ရတာပါ လီတောင်ကွဲထွက်တော့မယ် ဒီမှာကြည်…”
ကျနော်ပုဆိုးရောအောက်ခံဘောင်းဘီပါဆွဲချွတ်ပလိုက်ပြီး အစွမ်းကုန်တောင်မတ်နေတဲ့ ကျနော်လီးကြီးကို ကော့ပြလိုက်တယ်။
“အယ်….. ” အညို့ခံရသူလို တအယ်ပဲအယ်နေနိုင်ပြီး ထိပ်က အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ထွက်နေကာ တင်းမာတောင်မတ်နေတဲ့ ကျနော့်လီးကြီးကိုပဲ မျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်နေတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်လဲ သူ့ကို အတင်းဖက်ပြီး ဖင်တွေနို့တွေကို ကိုင်တွယ်ဖြစ်ညစ်ပလိုက်တယ်။
“အတင်းမလုပ်နဲ့ကွာ အကျီင်္တွေ ကြေကုန်မယ်။”
သူအကျီတွေကူချွတ်ပေးရင်း လက်တဖက်ကတော့ သူဖင်ကြီးကိုအငမ်းမရ လိုက်ပွတ်နေလိုက်တယ်။ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်သွားတော့ ထွက်လာတဲ့နို့တွေဖင်တွေက စောက်ရမ်းလှတာ။ မနေနိုင်ဘူး။ နို့တွေရော ဗိုက်တွေရော လျှောက်နမ်းပလိုက်တယ်။ လက်ကတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ပွတ်နေတာပေါ့။ စောက်ဖုတ်ကြီးကအရည်တွေရွဲပီး ဖောင်းထနေတာ။
“ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ အငမ်းမရပဲ….အန်တီ့ကိုအထင်သေးသွားပြီလားကွာ…အန်တီတခါမှ မဖောက်ပြန်ဖူးဘူး။ အခု မင်းနဲ့တွေမှ မနက်ကတွေတယ် အခု ဒီထိလိုက်လာဖြစ်သွားတယ်ကွာ.. “
“အထင်မသေးပါဘူး မမရယ်။..ဒါ ရေစက်ရှိလို့နေမှာပါ…ကျနော်လဲ မမကိုမြင်ကတည်းက…”
ပြောပြောဆိုဆို ဘွားတော်ရဲ့ နိုးကြီးတွေကို ငုံစို့ပလိုက်တယ်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ နို့ကြီးတွေဗျာ။ တင်းရင်းနေတာပဲ။ ကြီးလဲကြီးတယ်။ စို့ပေးတော့ နိုးသီးခေါင်းတွေထောင်လာတယ်။
ကျနော်လဲ သူ့ကိုကုတင်ပေါ်တင်လိုက်ပြီး မှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။
မှောက်လိုက်တော့ ဖင်ကြီးက မို့တစ်လုံးထွက်နေတယ်။ ဖင်က ကြီးတော့ စောက်ဖုတ်နဲ့စအိုကို မမြင်ရဘူး။
မကြာခင် ဒီဆော်ကြီးကို အပီလိုးရတော့မယ်……။
မှောက်နေတော့ ဘွားတော်ရဲ့ အိုးက မို့ထွက်နေတာဗျာ။ ဖင်ကကြီးတော့ သူ့အဖုတ်နဲ့စအိုကို မမြင်ရဘူး။ ဖင်ကြားလေးကို ဖြဲလိုက်တော့ စအိုညိုတိုတိုလေး ပေါ်လာတယ်။ ကျနော်လဲ စအိုဝလေးကို လျာဖျားလေးနဲ့ ထိုးလျက်ပလိုက်တယ်။
ဘွားတော် ဖင်ကြီး ကုန်းထတယ်။ ကုန်းထလာတော့ အောင်က စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ်လာတယ်။ ရွဲမနေဘူးဗျာ။ ဖားဂုံညသ်းကြီးလို ဖောင်းတင်းနေတယ်။ အဖတ်လဲလန်မနေဘူးဗျ။ဖောင်းပြီး အရည်တွေစို့နေတာ။
ကျတော်လဲ ဘွားတော်ကို လေးဘက်ကုန်းပုံစံ ဆွဲထောင်လိုက်ပြီး စောက်စိကနေ စအိုဝအထိ လျာအပြားလိုက်ယက်ပလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ စအိုဝကို ဖိယက်လိုက် ၊ စောက်ဖုတ်အဝလေးကို လျာနဲ့ထိုးလိုက်၊ စောက်စိကိုယက်လိုက် လုပ်နေတော့ ဘွားတော် ညီးသံမျိုးစုံထွက်လာတယ်။ မျက်စိတွေတော့ မှိတ်ထားတယ်။ ကျတော်လဲ သူ့ဖင်ဝကို ယက်ရင်းနဲ့ လက်တဖက်က စောက်ဖုတ်ထဲထိုးကလိတယ်။ လက်ညိုးကို စောက်ခေါင်းထဲ ထဲ့ရင်း၊ လက်မနဲ့ စောက်စိကို ပွတ်တယ်။ လျာက စအိုဝကို ဆက်လက်ယက်တယ်။ ဘွားတော် လူးပျံလာတာပဲ။ စောက်ခေါင်းကလဲ မျော့ပါတယ်ဗျာ။ လက်ညိုးလေးကို ဆွဲဆွဲ ညစ်နေတာ… လီးသာဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ စဉ်းစားသာကြည့်ဗျာ။
“အမလေးလေး….လုက်တတ်လိုက်တာ မောင်ရယ်….အား သေတော့မှာပဲ….အမေလး ရှီး….အင့် အင်းကွာ….ပွတ်ပွတ် အစိကိုပွတ်…
လေးဘက်ကြီးကုန်း ၊ ခါးကိုခွက်ပြီး ဖင်ကြီးထောင်ပေးထားရင်း ဘွားတော် ပါးစပ်က မျိုးစုံရေရွတ်နေတယ်။ ကျနော်လဲ ပါးစပ်ကယဖင်ဝကိုယက်၊ လက်တဖက်က စောက်ဖုတ်နဲ့ စောက်စိကို ကလိရင်း ကျန်တဲ့လက်တဖက်နဲ့ ဘွားတော်နို့သီးခေါင်းလေးကို လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နို့သီးခေါင်း ထိပ်ကလေးကို လက်ညိူးလက်မနဲ့ ဖိခြေပလိုက်တယ်။
“အမလေးလေး…အမလေး…ဟင်း…. ဘယ်လိုတွေတောင် လုပ်မေတာလဲ မောင်ရယ်…မောင်ရေ….မောင်….အမလေး… ထွက်ချင်လာပြီ….မောင်…မောင်ရေ… လာပြီး…လာပြီ….ထွက်..ပိ…အင့်….ဟူး. အား… အီး… ထွက်…ထွက်..ထွက်ပြီ….အမေရေ…အား…အမေလေး ကောင်းလိုက်တာ….အား….အား..”
ဘွားတော်က အတော်ထန်တာပဲဗျာ…..အသံအကျယ်ကြီးနဲ့ အော်ဟစ်ရင်း ဖင်ကြီးတွေ ယမ်းပြီးကို ပြီးတာ…အပြီးကြမ်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော့ပါးစပ်က ဖင်ဝမှာဆိုတော့ သူ့စောက်ရည်တွေတော့ ပါးစပ်ထဲမဝင်ဘူး။ စောက်ဖုတ်ကလိနေတဲ့ လက်ထဲမှာတော့ သူ့စောက်ရည်တွေ ရွဲကုန်တာပဲ။ ကျနော်လဲ ဒူးထောက်ရပ်ပြီး ခဏစောင့်နေလိုက်တယ်။ ဘွားတော်အထန်မကြီး…။ တခြားသူတွေဆို ဒီလောက်အပြီးကြမ်းပြီးရင် အိပ်ယာပေါ် ဖင်ကြီး ဘုန်း ဆို ပြုတ်ကျသွားတတ်ကြတာကလား။ ဘွားတော်ကတော့ ခေါင်းသာ အိပ်ယာပေါ်စိုက်ကျသွားတယ်။ ဖင်ကြီးက ထောင်ပြီး ယမ်းနေဆဲ၊ ခါးကလဲ ခုံးလိုက်ခွက်လိုက်နဲ့ ဖင်ကြီးက တက်လိုက်ကျလိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်လဲ အသဲယားလယတာနဲ့ ဘယ်ဘက်လက်က ဖင်သားကြီးကို ဖြန်းကနဲရိုက်ပြီး တဆက်ထဲ ဘွားတော်ကြီးရဲ့ ပြူးဖောင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်တဲ့တဲ့ကို ညာလက်ဖဝါးနဲ့ ဖတ်ကနဲ ခပ်ဆတ်ဆတ်ရိုက်ပလိုက်မိတယ်။
ကျနော်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ဘွားတော်ဟာ အဖျားတတ်သလို ညီးရင်း ဖင်ကြွးယမ်းနေတော့တာ။ ပြီးတော့
အရူးတယောက်လိုပဲ မျက်စိကိုစုံမှတိပြီး ပါးစပ်က လိုး လိုး မောင်ရေ မောင် ဆိုတာ အဆက်မပြတ်ညီးနေတာ။
“မမ ကျနော့်ကို လီးစုတ်ပေးဦး…”
“ပြီးမှ စုတ်ပေးမယ်ကွာ…. ခု အရင်လိုးပါတော့….လိုးတော့ မမစောက်ဖုတ်ထဲ မောင့်လီးကြီးနဲ့ လိုးပါတော့ကွာ….”
“လီးစုတ်ပေးပါလားဗျာ မမနှုတ်ခမ်းကြီးကြည့်ရတာနဲ့တင် လီးက တောင်နေတာ..မမရဲ့အဲနှုတ်ခမ်းထူကြီးနဲ့ စုတ်ပေးတာခံချင်တာ..ဘာလဲ မမက လီးစုတ်ရတာ မကြိုက်လို့လား”
“ဟင့်..အင်းကွာ…လီးစုတ်ရတာ အရမ်းကြိုက်တယ် ခုလဲ လျာတွေတောင်ယားတယ်။ ဒါပေမဲ့ စောက်ဖုတ်က ပိုယားနေပြီမောင်ရယ်….မောင်..မောင်ရေ မကို လိုးလိုက်ပါတော့ကွာ…မောင်ရာ…အသ်းဟင်း…
“ဒါဆို ကျနော်ထွက်ချင်ရင်တော့ မမစုတ်ပေးရမယ်နော်…”
“အင်းအင်း စုတ်ပေးမယ် စုတ်ပေးမယ်…ခုတော့ လို့တော့ကွာ…”
ကျတော်လဲ ဘွားတော်ရဲ့ ဖင်နောက်ကနေ ဒူးထောက်လိုက်တယ်။ ပူးကပ်နေတဲ့ ဖင်ကြီးနှစ်ခြမ်းကို လက်တဖက်နဲ့ ဖြဲပြီး၊ လီးကို စောက်စိကနေ ဖင်ဝအထိ ဖိပွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လီးကို အသာလေး ဖိသွင်းလိုက်တယ်။
ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ဖင်သာကြီးတွေရဲ့အထိအတွေကလဲ တအားကောင်းသလို စောက်ဖုတ်ကြီးရဲအထိအတွေကလဲ အရမ်းကောင်းနေတာ။ ကျတော်ရောဘွားတော်ပါ နှစ်ယောက်စလုံး ညီးနေကြတယ်။ တဖြေးဖြေးလိုးရင်းကနေ ခပ်သွက်သွက်လေး လိုးပလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကပ်ညှောင့်လေးညှောင့်ရင်း နို့တွေကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ နို့အုံကြီးကို လက်ဖဝါးနဲ့အုပ်ကိုင်ပြီး ဆုတ်ဆွဲလိုက်တယ်။ ဘွားတော် ခေါင်းက နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တယ်။ ကျနော်လဲ ခါးကုန်းပြီး ဘွားတော်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးကို စုတ်နမ်းလိုက်တယ်။ ကျနော့်အောက်နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲစုတ်ယူရင်း ကျနော့်လျာကို သူ့လျာနဲ့ ရစ်ပြီးဆွဲတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်လျာကိုပဲ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာနဲ့ မျှင်းပြီးစုတ်နေတယ်။ လီးကစောက်ဖူတ်ထဲ ညှောင့်နေရတဲ့ဘအရသာလဲ ကောင်းတယ်။ နို့ကြီးကိုင်ပွတ်နေရတဲ့ အထိအတွေ့ကလဲ ကောင်းတယ်။ နှစ်ခုလုံးက စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိတာကိုး…အဲအပြင် သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးနဲ့ စုတ်နမ်းခံရတာပဲ တကယ့် ဖီးလ်ဗျာ…. အရမ်းကောင်းနေတာ ဒီအတိုင်းဆို ထွက်ချင်လာတော့မယ်။
ကစ်ဆင်တွဲနေရင်းက အွင်းအွင်း…လို့ဖြေပြီး သူကုန်းထတယ်။ ကျနော်လဲ ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်တယ်။ ဘွားတော်က ကျနော့်ကိုခွပြီး လီးကို စောက်ဖုတ်နဲ့ တည့်ပြီး ထိုင်ချလိုက်က်တယ်။ ဆီးခုံချင်းကပ်ပြီး လမွှေးနဲ့ စောက်မွေးတွေထိတဲ့အခါ ခါးချည်းပဲလှုပ်ပြီး တဖြေးဖြေချင်းလိုးပါတော့တယ်။ ကျနော်လဲ အောက်ကနေ သူ့နို့သီးနှစ်ဘက်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နို့သီးခေါင်းနှစ်ခုကို လက်ညိုးလက်မလေးတွေနဲ့ ခြေပေးလိုက်တယ်။
“အား….အမလေးကွာ….ရှီး…ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရေ….ကောင်း…အင့် ရှီး….အား ကောင်းတယ်။ အဲလိုလေး အား… နို့ထိပ်တွေကို… အားအဲလိုလေး…..”
ဘွားတော်က နို့သီးထိရင် မရဘူး။ ပိုပြီးမတရားထန်လာတာ သတိထားမိတယ်။ သူ့နို့သီးထိပ်တွေကိုင်လိုက်တာနဲ့ အပေါ်ကနေ တဖုန်းဖုန်းစောင့်တော့တာပဲ။ ပြီးရင် ဖိကျိတ်လိုက် ကပ်ညှောင့်လိုက်၊ ခွာစောင့်လိုက်နဲ့ ဘွားတော် အတော့ကို ကောင်းနေတာ။ အပေါ်ကလိုးရင်း နှုတ်ခမ်းတွေကိုလဲ ပြတ်လုမတတ် ကိုက်နေတဲ့ သူ့မျက်နှာ ကြည့်ရတာလဲ ကျနော့်စိတ်ကို ပိုထန်စေတယ်။ အတွေ့လဲအကုန်ကောင်းတယ်၊ အမြင်ကလဲ စိတ်ထစေတယ်…ဒီမိန်းမကြီး ငါတသက်လုံးလိုးရရင် ကောင်းမှာလို့ တွေးမိသေးတယ်…။
ခဏနေတော့ ကျနော် ပက်လက်အိပ်နေရာကနေ ခါးကိုမတ်ပြီး သူ့နဲ့မျက်နှာချင်းအက်လိုက်တယ်။ ဘွားတော့နှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းငုံ့ပြီး နိူ့သီးထိပ်ကလေးတွေကို တဖက်စီ လိုက်စို့ပေးလိုက်တယ်။
ဘွားတော်လား ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ ပါးစပ်ကဘအသံမျိုးစုံညီးပြီး…အသကုန်လိုးနေတော့တာ။ ကျနော်လဲ သူပြီးခါနီးပြီဆိုတာသိတော့ နို့စို့ပေးနေရင်း သူ့ဖင်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ စုံကိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လီးနဲ့ စောက်ဖုတ်ကနေ စီးကျနောတဲ့ သူစောက်ရည်တွေကို လက်ခလယ်နဲ့ ကလော်လိုက်ပြီး ဘွားတော့ဖင်ဝမှာ သုတ်လိုက်တယ်။ ဖင်ဝလေးကို ပွတ်ပြီးကလိလိုက်တယ်။ ဘွားတော်စောင့်ချက်တွေက မြန်လာတယ်။ ကျနော်လက်ခလယ်ကို ဖင်ခေါင်ထဲ ဆတ်ကနဲ ထိုးထဲ့ပလိုက်တော့…
ဟာကွာ အမလေးမောင်ရယ်..မောင် ကွာ…အင်း…ရှီး အား…စောက်ဖူတ်ရောနိူ့တွေရောဖင်ခေါင်ထဲပါ တပြိုင်ထဲ လုပ်တော့ မခံနိုင်တော့ဘူးမောင်ရယ်…အား…ရှီး….အား လာတော့မယ်….လာတော့… အွင်း..အမလေးလေး….”
“မကောင်းလား….ခုမောင်လုပ်ပေးသလို စောက်ဖုတ်ကို ယောက်ျားတယောက်ကလိုး ဖင်ကိုတခြားတယောက်က ထိုး၊ နိုးတွေကို တခြားကောင်းတွေက တဖက်စီဝိုင်းစို့ပေးရင်… မ…ဘယ်လိုနေမလဲဟင်…”
ကျနော့စကားလဲဆုံးရော ဘွားတော်ဟာ ယမ်းပုံပေါ် မီးကျသလို….
သူ့ကာမစိတ်တွေဟာ ဝုန်းကနဲ ထပေါက်ကွဲတော့တာပဲ…..။
“အား….အား….အမလေး….ကောင်းလိုက်တာ….မောင်ရေ…ကောင်းလိုက်တာ….အား ရှီး…ထိုးထိုး ဖင်ထဲကို ဆက်တိုက်ထိုး အား… ကောင်းနေတယ်…လာပြီ လာပြီ ထွက်ပြီထွက်ကုန်ပြန်ပြီ….၊ အမလေး စို့စို့ နို့တွေလဲစို့.. အား….အား…. လိုးကွား မောင်…အင်… ရှီး အား…
လိုး လိုး….. မကို…. မကို ဝိုင်း…..ဝိုင်း..လိုး… ကြ…အားးးး….”
ဆိုပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်ပြီးပြီးသွားတယ်။ ကျနော်လဲ အသာပက်လက်လှန်ပေးလိုက်တော့ သူကျတော်အပေါ်မှောက်ကျလာတယ်။
အသက်ရှုသံပြင်းပြင်းနဲ့အမောဖြေနေတယ်။ ခဏကြာ သူအမောပြေတော့မှ…. ကျနော့်ပါးကိုနမ်းရင်း
“အော် ပြောပြီးပြီပဲ မရယ် မသေးပါဘူး။ ဒါနဲ့မက အရမ်းတာနေပုံရတယ်။ မမမှာ ဘာမှမရှိဘူးလားဟင်…”
“ဟင်းဟင်း ဘာလဲ ဘာမှမရှိဘူးလားဆိုတာ….မောင်ကလဲလေ ခုလောက်ဖြစ်ပြီးနေတာကိုပဲ မေးရမှာ အားနာနေသေးတယ် တကထဲမှ”
“အင်း ဟုတ်တယ်….မေးရမှာအားနာလို့ မမမှာ ယောကျားမရှိဘူးမလားလို့”
“ဟင်…. အော်…..ဒါဆို မမယောကျားက အဝေးရောက်နေလို့မလား…”
“အာ…ဒါဆိုမမက အစားအသောက်လဲမှန်နေတယ်လို့ ပြောတာလား”
“တွေ့လား အထင်မသေးဘူးလဲဆိုသေး လူကို မေးနေတဲ့ပုံစံက”
“အော် မဟုတ်ပါဘူး မမရယ်…ခုနက မမက အရမ်းဖီးလ်တွေ တတ်နေတော့လေ ပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေကလဲ အပျိုတွေထက်တောင် ကောင်းသေးတာဆိုတော့ မထင်ဘူးလေ.. အပျိုကြီးလား ယောကျားဆုံးသွားတာလား၊ ကွဲနေတာလား..အဲလို တခုခုထင်တာပါ။ အရမ်းလဲကောင်နေတော့ အံအောတာပါ မမရယ်..အထင်မသေးပါဘူး”